Malunga neAasraw
I-Aasraw Biochemical Technology Co, l yasekwa ngabafundi abagqibeleleyo be-Ph.D abahlanu kubuchwephetsha bemichiza abavela kwiDyunivesithi yase-Tulsa, e-Oklahoma, ekumhlaba weUnited States.
I-AASraw esandula ukusekwa ifumene inkxaso-mali yokuqalisa, kwaye ke itsala inani leemichiza ezisemgangathweni ophezulu, uninzi lwazo kugxilwe ikakhulu kumzi mveliso wezinto eziphilayo. Ngomjikelo ophumeleleyo wenkxaso-mali yokuqala, sityale imali kwisixhobo somgangatho ophezulu esizinikezele kulungelelwaniso, ukucoceka, kunye nohlalutyo lomgca wemveliso yethu. Siyi-laboratory epheleleyo, kwaye ayisiyiyo nje umthengisi weemveliso zenye inkampani. Sine-suite epheleleyo yezixhobo, kubandakanya-umahluko wokuskena iikhalori, ukusebenza kolwelo okuphezulu, i-infrared spectroscopy, i-ultraviolet-spectroscopy ebonakalayo njl. Iimpahla zethu ezinzileyo zizonke zingaphezulu kwezigidi ezingamashumi amathathu zeedola (i-US).
Ukongeza kwiiprojekthi zethu zentsebenziswano ezide, senze iiprojekthi zonyaka ezihlanu ukuya kwezi-8. I-AASraw inamakhemitha angaphezu kwekhulu kwimveliso eninzi. Phantse ezisibhozo zala maqulunqa anikezelwa ngqo kubathengi, ngelixa malunga nama-makumi anesibini akhiqizwa phantsi kwekhontrakthi kwiinkampani ezingaphezu kwama-amathathu kwiinkampani zokuxuba.
Ukulandela isiqubulo esithi "Ubulumko, Ukholo, iNkonzo," I-AASraw ibonelela ngeempahla ezikumgangatho owahlukileyo, ixabiso eliphantsi kunye nokusebenza ngokukuko ukunceda ngcono ubomi kwihlabathi liphela. Zonke iimveliso ezivela kwi-AASraw zinikezelwa ngokucoceka okungekho ngaphantsi kwe-98%, kwaye zonke zilawulwa ngokungqongqo phantsi kwe-ISO9001, i-UPS 36, i-BP2016, i-EP6, i-GMP okanye ezinye izatifikethi njengoko kufuneka ukuhlangabezana nemigangatho efunekayo yamazwe angenisayo.
Innovation ngumthombo wethu wamandla. Ngomsebenzi onzima wabo bonke abasebenzi bethu abazinikezele, ukunyamezela kwabo, kunye nokusebenza kwethu ngokubambisana kunye namashishini afanelekileyo, iikholeji kunye namaziko, i-AASraw iye yaphucula ukusebenza kwethu ngokubambisana ubuncinane nge-30%, ekuncedeni ukunciphisa intengo yethu ngokuthelekiswa nabanye abaphakeli, ngoko bhetele ukukhonza abathengi bethu abathembekileyo, kunye nokunciphisa inkunkuma engena kwindawo.
I-AASraw izama ukusekwa umgangatho wemigangatho kunye nexabiso. Sinikela ngenkonzo enyanisekileyo, kunye nekhwalithi yekhwalithi ephezulu kunye nezobuchwephesha, ukuba sikulethe kuphela okugqwesileyo kwiimveliso. Sibeka umgangatho omgangatho ophezulu kumashishini ethu.